Ahoana ny fanoratana tesis tsara? Victor Mochere
Efa akaiky ny fizarana diplaoma ary mila miomana amin'izany ianao. Tsy ho an'ny fankalazana ihany fa amin'ny fanaterana ny taratasinao farany. Ny fanoratana ny tesiso dia dingana mila fotoana. Ny tesis dia taratasy sarotra mila soratanao sy hikaroka ary atolotra amin'ny komity fanombanana. Ny fanoratana taratasy farany dia ampahany amin'ny fianarana any amin'ny oniversite ary ny mpianatra tsirairay dia handalo izany. Na dia toa sarotra aza izany, miaraka amin'ny toro-hevitra sy fika vitsivitsy ary torolalana sasantsasany, azonao atao ny manitsy azy. Tafiditra ao anatin'ny dingan'ny fizarana diplaoma izany, ka tsy azonao atao ny mandingana ity dingana ity. Noho izany, ahoana ny fanoratana ny thesis? Inona avy ireo torohevitra sy fika tokony harahina? Misy zavatra tokony ho ao amin'ny thesiso ve?
1. Mitadiava lohahevitra iray ary amboary ny hevitrao
3. Manomboka manoratra
4. Voalohany vs farany
5. Fepetra sy zavatra andrasana
Ny fanoratana tesis dia mety ho toy ny enta-mavesatra indraindray, saingy ampahany manan-danja amin'ny maha-mpianatra eny amin'ny oniversite izany. Noho izany, ny zavatra voalohany tokony hataonao dia ny mitady lohahevitra iray ary mandrafitra ny hevitrao. Ny fomba tsotra indrindra dia ny mifidy lohahevitra tianao na tianao ho fantatra bebe kokoa. Hahafinaritra kokoa ny fiasanao amin'ny thesiso ary ho voatosika kokoa hamita izany ianao.
Ary ny ampahany manaraka dia momba ny fandaminana ny hevitrao. Azonao atao ny mamaky boky na manao fikarohana. Ary izany dia ho tonga miaraka amin'ny fampahalalana sy hevitra maro. Noho izany, ilaina ny mamolavola ny hevitrao sy mandamina azy ireo amin'ny fomba mahomby mba hamoahanao tesis mazava sy maharesy lahatra. Izao no fotoana izay mety hahatsapanao ho tototry ny asa tokony hataonao.
Zava-dehibe ny dingana fikarohana rehefa manoratra taratasy akademika manan-danja toy ny thesis ianao. Na inona na inona lohahevitra nofidinao dia mila manohana ny hevitrao amin'ny zava-misy sy antontan'isa ianao. Mila mieritreritra petra-kevitra sasantsasany ianao ary avy eo manao fandalinana na mitady ny fampahalalana izay manohana ny hevitrao. Ary izany dia mitaky fikarohana lehibe. Azonao atao ny manomboka mamaky ny fianaranao amin'ny lohahevitra iray manokana na mijery ny fianarana any amin'ny tranomboky. Azonao atao ny miverina amin'ny lesona any an-tsekoly izay nahatonga anao ho tia ny taranja nofidinao.
Eny, angamba ny dingana lehibe indrindra amin'ny dingana dia ny manomboka manoratra. Na dia mety mahatsapa aza ianao fa manana zavatra bebe kokoa hiomanana amin'ity fotoana ity, dia tsara kokoa ny manomboka haingana araka izay tratra. Ny tesis dia tokony manana pejy 40 ka hatramin'ny 80, saingy mazava ho azy fa miankina amin'ny fepetra takian'ny oniversite izany. Mila fotoana kely anefa ny hanoratana ireo pejy ireo, noho izany dia soso-kevitra ny manomboka haingana araka izay tratra.
Izany dia hanome anao fotoana bebe kokoa handaminana ny hevitrao ary hahazoana antoka fa hampita tsara ny hafatra ianao. Afaka manomboka manoratra izay ao an-tsainao momba ny lohahevitra nofidinao ianao. Azonao atao ny mandamina ny fampahalalana amin'ny toko ary manamarika ny hevitrao amin'ny teboka bala. Na izany na tsy izany dia tsara, zava-dehibe ny manomboka manoratra. Ity no drafitra voalohany ho anao. Azo antoka fa hitondra fanovana vitsivitsy ihany koa ianao.
Tena ilaina ny manavaka ny drafitra voalohany sy farany. Mpianatra maro no tsy manomboka manoratra satria te hamorona tesis mahery vaika izy ireo ary mahatsapa fa mila fikarohana na fotoana bebe kokoa. Saingy tadidio fa ny drafitrao voalohany dia tsy ho ny farany. Azo antoka fa hahita antontan'isa sy zava-misy hasehonao ianao aorian'izay. Azo antoka fa rehefa mamerina mamaky ilay drafitra ianao dia hanana fomba fijery vaovao ary mamerina fehezanteny, manampy teny, sns. Noho izany, aza latsaka ao anatin'ny fandrika miandry mandra-panombohanao manoratra. Azonao atao ny manova azy avy eo; ny zava-dehibe indrindra dia ny manana zavatra ovaina.
Eny ary, mila mahafantatra sy mahafantatra ny fepetra takinao ianao ary ny andrasan'ny mpanadina. Na izany aza, ny sasany amin'izy ireo dia mahazatra amin'izy rehetra. Te-hamaky tesis mazava sy milamina ary mitombina izy ireo. Te-hahita izy ireo fa ny hevitrao dia tohanan'ny zava-misy, antontan'isa, tabilao, sy ny sisa.
Tian'izy ireo ho hita fa nanao fikarohana be dia be ianao, fa azonao ny lohahevitra sy ny teoria. Tian'izy ireo ho hita fa tany am-boalohany sy mamorona ianao amin'ny asanao ary manampy lanja bebe kokoa amin'ny sehatra iray manontolo izany. Miankina aminao ny fomba fananganana ny thesis anao. Na izany aza, azonao atao koa ny mampiditra tantara iray, fa tsy mitovy amin'ny mamaky ny mahery fo izay mahazatra antsika.
Mety ho toy ny enta-mavesatra ny fanoratana tesis tsara. Indrindra rehefa tsy manana torolàlana mazava ianao hanampy anao hanomboka. Noho izany, mba hanaterana thesis mahery sy mazava, ireto misy toro-hevitra sy fika sasany hanohanana ny dingana manontolo. Mitadiava lohahevitra iray, amboary ny hevitrao ary manaova fikarohana. Manomboha manoratra ary tadidio fa ny drafitrao voalohany dia tsy ny farany. Noho izany, hanana fotoana betsaka ianao hanampiana fampahalalana na hamerenana fehezanteny. Ataovy azo antoka fa fantatrao ny fepetra ilainao arahina, toy ny fandrafetana ireo. Tanjona ny hanatratra ny andrasan'izy ireo amin'ny famakiana thesis tany am-boalohany, famoronana ary tohana tsara.